Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguIrene
I-bungalow evalelweyo, enikwe ngothando yeholide enendawo yayo yokuqhuba / yokupaka.
Uya kufumana indawo yabantu abadala be-2 kunye nabantwana be-2 kwigumbi lokulala elahlukileyo elinezixhobo zanamhlanje.
Izixhobo zala maxesha ezinePC / ilaptop, iWLAN intanethi, intambo / iTV ye-intanethi eneSkype kunye nenkqubo yestereo enesitishi se-iPhone ayishiyi nto ifunwayo nokuba ngabahambi abancinci kwaye ke bahlala benxibelelana kwi-Intanethi!
Kwigumbi lokuhlala / lokutyela elinekhitshi elimilise okwe-L, isitovu esifakwe ithayile sihlonyelwe kunye nerekhi yewayini yendalo enewayini entle!
Igadi enkulu yasebusika inconywa ngeglasi yewayini ngombono weenkwenkwezi.
Umculo ovela kwi-stereo uhamba nawe kwindawo yokuhlambela kunye ne-walk-in, ishawa epholileyo phantsi kwephaneli ye-massage. Uqala usuku ngesidlo sakusasa kwindawo yethu enelanga.
Uqala inkqubo encinci yempilo ngokungena kwi-sauna yakho ye-Rosenquarz bungalow yeeholide ...
Le bungalow yeeholide yindawo engatshaywayo, apho kungekho zilwanyana zasekhaya zihlala khona. Uya kufumana "ikona yokutshaya" kwindawo ye-terrace, ngelishwa abahlobo bakho obathandayo abanemilenze emine kufuneka bahlale ngaphandle!
I-complex yeholide ifumaneka ngokukhululekile, zonke izibonelelo zangaphandle kunye nezixhobo zinokusetyenziswa. Siyavuya ukuthetha nawe ngokobuqu, ngefowuni, iSMS okanye i-imeyile.